”Mustaqbalka ciyaaraha Talyaanigu waa mid ifaya.” – Giampiero Ventura – Gool FM
”Mustaqbalka ciyaaraha Talyaanigu waa mid ifaya.” – Giampiero Ventura
Raage January 14, 2017
(Roma) 14 Jan 2017 – Macallinka xulka Talyaaniga ee Giampiero Ventura ayaa rumaysan in lacagaha lagu iibsadey Roberto Gagliardini iyo Mattia Caldara ay muujinayaan “inuu mustaqbalka ifaya leeyahay horyaalka Talyaaniga.”
Atalanta ayaa todobaadkan laga iibsadey 2 laacib oo Talyaani ah oo ka tirsan da’yarteeda soo baxaysa waana Gagliardini oo Inter Milan ku aadey €28m, halka Caldara uu Juventus wixii loo gaaro 2018 uu kula biirayo €25m.
“Waxay tani xaqiijinaysaa wixii aan horay u sheegay, ee ahaa inuu Talyaanigu soo saaray laacibiin hibo kubadeed leh oo ka badan inta ay dadku u maleeynayaan,” ayuu Ventura ku yiri Sky Sport Italia.
“Waxay ila tahay inaan haysanno curiye kasta oo loo baahan yahay in wax wanaagsan la sameeyo mustaqbalka. Mustaqbalka ciyaaraha Talyaanigu waa mid ifaya.”
Miyay wanaagsan tahay inay laacibiintan da’da yari ay xilligan hore ku biiraan kooxaha waawayn?
“Muhiimaddii waa in si joogto ah loo dheelsiiyaa iyadoon garbohooda culays badan la saaraynin.” ayuu ku jawaabey Ventura.
AC Milan ayaa sanadkii hore min 20 milyan kusoo iibsatey daafaca Alessio Romagnoli iyo Andrea Bertolacci oo haatan qayb ka ah safka hore ee kooxda iyadoo ay haatan suuqa yaallaan laacibiin da’ yar oo Talyaani ah oo la wada doonayo.
TOOS u daawo: Leicester City vs Chelsea - LIVE (Shaxda sugan)
Koobka Qaramada Afrika 2017 oo caawa daaha laga rogay, xilli xulalka Gabon iyo Guinea-Bissau ay barbaro ku kala baxeen